विदेशी लगानीका १९४ उद्योग दर्ता, सेवामूलक र पर्यटन उद्योगमा बढी | गृहपृष्ठ
Home समाचार विदेशी लगानीका १९४ उद्योग दर्ता, सेवामूलक र पर्यटन उद्योगमा बढी
विदेशी लगानीका १९४ उद्योग दर्ता, सेवामूलक र पर्यटन उद्योगमा बढी
वैशाख ३, काठमाडौं । उद्योग विभागमा चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा विदेशी लगानीका १ सय ९४ उद्योग दर्ता भएका छन् ।
विभागले दिएको जानकारीअनुसार फागुन मसान्तसम्म ठूला १०, मझौला ४ र साना १ सय ८० उद्योग दर्ता भएका हुन् । विदेशी लगानीका साना उद्योग, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका मझौला र ठूला उद्योग गरी विभागले १ सय ९४ उद्योग दर्ता गरेको हो । स्वदेशी लगानीका साना उद्योग भने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र घरेलु तथा साना उद्योग विभागले दर्ता गर्दै आएका छन् ।
दर्ता भएका उद्योगमध्ये कृषिजन्य ११, ऊर्जामूलक ४, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि १७, उत्पादनमूलक ३९, खनिज १, सेवामूलक ६२ र पर्यटन ६० उद्योग रहेका छन् । रू. १० करोडभन्दा सानो लगानीका उद्योगलाई साना उद्योग, रू. १० करोडदेखि २५ करोड लगानीसम्मका मझौला र रू. २५ करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दै आएको विभागले १ सय ९४ उद्योगबाट रू. ३४ अर्ब ९१ करोड ७ लाख बराबरको लगानी भित्र्याएको छ । विभागमा हालसम्म झण्डै ७ हजार ५ सय उद्योग दर्ता भएका छन् ।
विभागका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भुसालले देशमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिर सरकार बनेकाले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढेको बताए । ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढेको छ,’ उनले बताए । रासस